Guam fizahan-tany fehezin'ny United Airlines sy Kim Jong-un
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Korea Avaratra » Guam fizahan-tany fehezin'ny United Airlines sy Kim Jong-un
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Omaly dia nandeha tamin'ny sidina United Airlines avy any Shanghai mankany Guam aho. Saika foana ny fiaramanidina, angamba mpandeha 15 tao anatiny.
Raha jerena ny enta-mazon'ny famandrihana sy ny sarintany seza amin'ny sidina hafa mankany Guam amin'ny United Airlines, dia toa sidina avy any Japan, China, ary na dia avy any Honolulu aza dia manidina miaraka amin'ny mpandeha vitsivitsy.
Araka ny antontan'isa iray vao nivoaka avy amina orinasa mpikaroka UK, dia nidina efa ho 65% ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena tany amin'ny faritanin'i Etazonia taorian'ny fandrahonana 2 voarain'i Korea Avaratra handefa baomba nokleary any Guam.
Ny manavotra an'i Guam izao dia ny Koreana mihitsy - ny Koreana Tatsimo. Milamina ny fahatongavana, tsara ny enta-manidina, ary mahita mpizahatany Koreana mankafy ny torapasika, fivarotana ary trano fisakafoanana ao Guam ianao.
Ny namana lehibe indrindra, nefa koa ny fahavalo lehibe indrindra, amin'ny fahatongavan'i Guam fizahantany dia United Airlines.
United Airlines dia mitazona monopole amin'ny sidina mivantana mankany Honolulu, vavahady mankany amin'ny tanibe amerikana ho an'ny dia any amin'ny faritany.
United Airlines dia miasa hub, fantatra taloha amin'ny hoe United Micronesia hanompo any Japon, Korea, China, Filipina, Australia, ary nosy Pasifika hafa avy any Guam.
Ity ny olana.
Ny mpandeha iray mividy tapakila any Honolulu na any Los Angeles te-hanidina ho any Shanghai, Japon, na toeran-kafa, dia mila mifandray ao Guam izy ary tsy mahazo mijanona any Guam.
Ny fijanonana ao Guam matetika dia telo heny ary avo efatra heny ny vidin'ny tapakila.
Ny sidina avy any Honolulu mankany Guam dia lafo kokoa noho ny saran-dalan'ny rivotra avy any Honolulu mankany Eropa, saingy afaka manidina avy any Honolulu mankany Shanghai ohatra ianao amin'ny $ 639 mandroso sy miova Guam. Ny tapakila mankany Guam fotsiny dia manodidina ny 2,000 $. Ny fijanonana ao Guam hijerena ny fizahan-tany Guam dia hampitombo ny tapakilananao farafahakeliny avo telo heny.
Miaraka amin'ny fiaramanidina banga, United dia tsy manana afa-tsy safidy roa - manitsy ny saran-dalan'ny rivotra na ny lalana tapaka. Ny fizahan-tany Guam dia eo am-pelatanan'ny fanapahan-kevitra.
Ny fanadihadiana nataon'ny ForwardKeys dia nanambara fa ny fametrahana sazy vaovao an'ny ONU, narahin'ny fihoaram-pefy momba ny kabary feno fankahalana teo amin'i Donald Trump sy Kim Jong Un tamin'ny 9 Aogositra, dia niteraka fihenan'ny fizahan-tany ho an'i Guam. Tamin'izay i Donald Trump no nampitandrina fa izay fandrahonana rehetra atao any Etazonia dia hihaona amin'ny "afo sy fahatezerana" ary namaly i Pyongyang, nilaza fa "mandinika tsara" ny drafitra hamelezana an'i Guam, fonenan'ny tobin'ny tafika amerikana. Tao anatin'ny dimy herinandro taorian'izay, ny olona tonga nijanona teo anelanelan'ny efatra sy roapolo alina (fitsidihan'ny mpizahatany mahazatra), dia nilatsaka 9%, niaraka tamin'ny fahatongavan'ireo avy any Japon, tsena fiaviana manan-danja indrindra Guam, nilatsaka 30%.
Ny fianjeran'ny dia tany Guam dia mety ho lehibe kokoa, raha tsy noho ny fiakaran'ny hafanam-po ho an'ny nosy Pasifika avy any Korea Atsimo. Talohan'ny 9 aogositra, ny tonga tao Guam dia nitombo 11% fa izany dia vokatry ny fiakaran'ny 41% ny dia avy any Korea Atsimo, nanala ny 13% ny fitsidihan'ny Japon.
Amin'ny famokarana ny tatitra nataony, ForwardKeys dia mamakafaka fifanakalozana famandrihana sidina mihoatra ny 17 tapitrisa isan'andro, maka ny angon-drakitra avy amin'ireo rafi-pitehirizana an'habakabaka lehibe rehetra sy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voafidy sy mpizahatany. Ity fampahalalana ity dia nohatsaraina miaraka amin'ireo angon-drakitra tsy miankina hafa, ao anatin'izany ny fikarohana momba ny sidina sy ny antontan'isa ofisialin'ny governemanta miampy ny siansa data mba hanehoana ny sarin'iza izay mandeha aiza ary rahoviana ary maminavina ireo lamina fitsangatsanganana ho avy.
Raha jerena lalindalina kokoa ny drafitry ny olona handeha ho any Guam amin'ny famakafakana ireo fitsangatsanganana natao hatramin'izao (ho an'ny fijanonan'ny faharetana mitovy), dia mazava fa taorian'ny 9 Aogositra, ny famandrihana ankapobeny dia nilatsaka 43%, naoty tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa ary ny famandrihana avy amin'ny Nidina 65% i Japon. Raha ampitahaina dia nidina 16% ny famandrihana avy any Korea Atsimo.
Raha jerena mialoha, amin'ny famakafakana ny toetran'ny famandrihana ankehitriny natao ho an'ny dia mankany Guam hatramin'ny faran'ny taona, ny zava-misy ankehitriny dia ny famandrihana ankapobeny dia 3% ao ambadiky ny toerana nisy azy ireo tamin'ny taon-dasa. Ny famandrihana ankehitriny avy any Japon dia ao ambadiky ny 24%; avy any Etazonia, 17% no ao ambadik'izy ireo; avy any Hong Kong, ao ambadiky ny 15% izy ireo ary avy any Chine, any aoriana izy ireo 51%. Na izany aza, amin'ny fanamarihana iray tena mampahery kokoa, ny famandrihana ankehitriny avy any Korea Atsimo dia 14% mialoha.
Ny fitomboana matanjaka ao amin'ny famandrihana dia azo lazaina ho mampitombo ny fahafahan'ny rivotra eo anelanelan'i Guam sy Korea Atsimo. Nanomboka ny 13 septambra 2017 lasa teo ny Air Seoul no mpitatitra enina avy any Korea nanome serivisy mivantana an'i Guam. Ny fandaharam-potoana voalohany dia fiasa in-dimy isan-kerinandro fa ny Air Seoul dia hampiakatra izany amin'ny asa isan'andro amin'ny volana oktobra.
Mario Hardy, CEO, Pacific Asia Travel Association, dia naneho hevitra hoe: “Miaina amin'ny tontolo tsy milamina sy tsy azo antoka ary tsy fandriam-pahalemana tsy ankijanona izaitsizy isika, izay mitebiteby indrindra amin'ireo toerana maro manerantany. Manomboka mahatsapa ny fiantraikan'ny teny ady nifanaovan'ny mpitondra firenena roa ny nosy Guam ary mampatsiahy antsika ny halemin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany. ”
Olivier Jager, CEO, ForwardKeys, dia namintina hoe: "Na dia mampatahotra aza ny fivarotana famandrihana ho an'i Guam, ny famandrihana amin'izao fotoana izao dia notifirina haingana ihany ary mbola azo atao ihany ny miverina amin'ny laoniny, raha ohatra ka nahatonga ny olona hamandrika fotsiny taty aoriana (izany hoe manakaiky ny datin'ny dia) fa tsy ho avy. Tsy afaka gaga ny olona iray fa ny fihenjanana eo amin'ny Korea Avaratra sy Etazonia dia nanakana ny mpitsidika an'i Guam. Ny tena mahaliana dia ny habeny miavaka izay ny tsena Koreana Tatsimo no 'Knight fotsy', manosika ny fironana. Azoko atao ihany ny manombatombana fa ny Koreana Tatsimo dia nahazo fientanam-po tamin'ny filazan'i Guam fampiroboroboana fa io no tanjona lavorary ho an'ny fitiavana - ary amin'ny fandehanana any, dia mampiseho fa liana kokoa amin'ny fitiavana noho ny ady izy ireo! ”